အိပ်စက်ရာမှာ စည်းဝါးကျစေဖို့ရာ | OnDoctor
“Good night, Sound sleep, sweet dream”ပါတဲ့။ အိပ်ခါနီးနှုတ်ဆက်လေ့ရှိတဲ့စကားလေးတေပါ။အိပ်မက်လေးတေလှပါစေ၊အိပ်ရေးများလည်း၀ပါစေပေါ့။ လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိစေဖို့အိပ်ရေး၀ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ဒီတော့အိပ်ရေး၀တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ အိပ်ရေး၀အောင်ဘယ်လိုတွေနေထိုင်ကြမလဲ။
လူတေအိပ်ကြပြီဆိုရင်အိပ်စက်ခြင်းသံသရာဟာ Non-REM နဲ့ REM ခေါ်တဲ့အဆင့် ၂ မျိုးနဲ့လည်ပတ်ပါသတဲ့။ စအိပ်ပျော်တာနဲ့ Non-REM နဲ့စပြီးနောက်မိနစ် ၉၀ ခန့်ကြာရင် REM အဆင့်ကိုရောက်ပါတယ်။ REM အဆင့်မှာ ပျမ်းမျှ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာပြီးရင်အိပ်စက်ခြင်းသံသရာ နောက်တစ်ကျော့လည်ပါတယ်။ Non-REM အဆင့်ကို အပိုင်း၁၊၂၊၃၊၄ ဆိုပြီးအပိုင်း ၄ ပိုင်းထပ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အပိုင်း၁၊၂ မှာစပြီးနှလုံးခုန်နှုန်း၊ ခန္ဒာကိုယ်အပူချိန်၊ ဉီးနှောက်လှိုင်းများစသဖြင့်ဖြည်းနှေးလာပြီးအပိုင်း၃၊၄လောက်ရောက်တဲ့အခါခန္ဒာကိုယ်အတော်လေးအနားရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်လို့အလွန်ကိုနှိုးရခက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အနှိုးခံရရင်မူး‌‌‌ေ၀နောက်ကျိပြီးကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ နောက်ဒီလိုအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်တေ မရှိခဲ့ရင်၊ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်တာထက်နည်းနေခဲ့ရင်ဘယ်လောက်အိပ်အိပ်၊အိပ်ရေး၀တယ်မထင်ပဲနုံးချိထိုင်းမှိုင်းနေတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခန္ဒာကိုယ်အင်အားများပြန်ပြည့်တင်းတာ၊ဆဲလ်တွေဆပွားတာ၊သွေးလည်ပတ်မှုတိုးပွားကောင်းမွန်တာ၊ကိုယ်ခံအားစနစ်ဖြည့်တင်းတာမျိုးတွေဟာနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ဘယ်နှနာရီလောက်နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်ဖို့လိုအပ်ပါသလဲဆိုရင်အိပ်ချိန်ရဲ့၂၀%လောက်ပျမ်းမျှလိုအပ်ပါ တယ်။ပုံမှန်အိပ်ချိန်ဟာ၇နာရီကနေ၉နာရီလောက်ရှိသင့်တာမို့အနည်းဆုံးမိနစ်၁၀၀လောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှတော့နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်ချိန်တေဟာလည်းလျော့ကျလာတတ်ပါတယ်။
၁. နေ့စဉ်အိပ်ချိန်မှန်ပါစေ။ (ညဘယ်နှစ်နာရီမှာအိပ်မယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ထားပါ။)
၃. မီးပိတ်ပါ။ တိတ်ဆိတ်နေပါစေ။ (အိပ်ရာ၀င်သီချင်းလေးတွေသုံးနိုင်ပါတယ်)
၄. အိပ်ရာမ၀င်ခင်စာဖတ်တာ၊ တရားထိုင်တာ စတဲ့အကျင့်မျိုးလေးတေမွေးပါ။
၅. ဒါပေမဲ့အိပ်ရာမ၀င်ခင်အများကြီးစားတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေအရမ်းလုပ်တာမျိုးတွေရှောင်ပါ(နေ့တွေမှာလုပ်ပါ)။
၆. အိပ်ရာထဲမှာလူးလှိမ့်မနေပါနဲ့။ အိပ်မပျော်ရင်ပြန်ထလိုက်ပါ။
၈. အိပ်ရာထဲမှာ ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာစသည်မကြည့်ပါနဲ့။
၉.မျှတစွာစားပြီး အဟာရပြည့်အောင်နေပါ။ ကယ်ဆီယံ၊ ပိုတယ်ဆီယံ၊ မက်ဂနီဆီယံ၊ဇင့်၊ Vitamin A, C နဲ့ D တို့ ဟာနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်ခြင်းကိုပံ့ပိုးနိုင်တယ်ဆိုပါတယ်။
အိပ်ရေးမ၀ခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ Alzheimer ရောဂါတို့နဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့ဆို တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အိပ်ရေးလည်း၀၊အိပ်မက်လည်းလှကြစေကြောင်းအနည်းငယ်တင်ပြလိုက်ရ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Author : Dr. ဖြိုးဆုရည်မွန်
မျက်နှာအသားအရေကို ချောမောလှပစေမည့် အိမ်တွင်းသုံးနည်းလမ်းများ